Ko Bulawayo Uzulu Ukhathazwa Yikhuhlala Kwebutho Emphakathini
Ukuhlala kwebutho lomphakathi sekuyinto esisolwe nguZulu jikelele esithi kuyinto ephazamisayo ikakhulu ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho.
KoBulawayo iButho libonakala labasakhulayo enkundleni yeWhite City Stadium besenza inhlelo ezingajwayelekanga njalo bahlala eMabuthweni Police Station.
Kunsuku ezidlule ibutho beliqhatsha abatsha abasakhulayo. Lobanje kuyinto evamileyo uZulu sole lesi senzo ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho bethi akudingeki ukuqhatsha ibutho lona ilizwe lingelamali njalo kungela kwesabela ukuthi Kungaqhamuka impi.
Ibutho leZimbabwe liqale ukugcwala okungelamahloni emphakathini ngesikhathi bengcedisana lezinye inkokeli zebandla elibusayo ekuguquleni umbuso kaRobert Mugabe ngomnyaka odlule NgoLwezi.
Ukhansila kaWard 7, uMnu. James Sithole uthi okwenzakalayo kukhahlameza uzulu njalo kuyethusela uzulu ukthi ayekhetha inkokheli abazifunayo kukhetho oluzayo ethi kufana lokwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe weGukurahundi.
Ungezelele ethi kusobala ukuthi kwenziwa libandla elibusayo ngoba akukabi ngitsho lombiko osuka kuMongameli Mnangagwa leButho leZimbabwe besola ukusabalala kwebutho kumphakathi.
Evumelana lombono kaKhansila uSithole, iSakhamuzi sakoBulawayo uMnunznana Aleck Ndlovu uthi okwenzakala elizweni ngemva kokuthatha uzibuse bekuyinti abangayikhangelelanga kodwa bakhangelele ukuba uMongameli leNkokheli zeButho zisole lesi senso.
IButho leZimbabwe lithakazelelwe nguZulu ngesikhathi ligenqula uHulumende kaMugabe, kodwa ngemva kwalokho kube lensolo lacina libuyele enkambeni kodwa seliphendukile njalo emphakathini, abanye bavunula impahla yebutho kuthi abanye bazigqokela impahla zabo.
Kuminyaka edlule ibutho belicalwa ngokuncedia ukudlilibezela ukhetho into abantu asebesesabela ukuthi ingenzeka kukhetho esibhekane lalo.